Arotsany feno isika - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2015-03 mpandimby ny Magazine > Manome antsika feno izy
Tena tiako ny kaopy misy dite mafana ka manonofy kaopy tsy ho lany ary mafana foana. Raha ho an'ny mpitondratena ao 1. Nahomby ny Mpanjaka 17, nahoana no tsy ho ahy koa? Mananihany.
Misy zavatra mampitony ny kaopy feno - ny kaopy tsy misy na inona na inona dia mampalahelo ahy foana. Nianatra hira tao amin’ny “tobin’ny vehivavy” tany Nouvelle-Fondéland (Kanada) antsoina hoe “Fenoy ny kapoakako, Tompoko” aho. Taona vitsy lasa izay ny fotoana malalaka, fa ny tononkira sy ny feon'ity hira ity dia mbola eo am-poko. Vavaka amin’Andriamanitra mba hanala ny fanahiko mangetaheta, hameno sy hanavao ahy ho fanaka.
Matetika isika milaza fa afaka miasa tsara ihany isika rehefa feno. Mino aho fa marina indrindra izany ho an'ny introverts, saingy tsy misy na iray aza afaka hahatratra ny fara tampony miaraka amin'ny ezaka kely indrindra. Ny fomba tsara indrindra hijanonana ho feno dia ny fitazomana tsara sy mihamalalaka tsara amin'Andriamanitra. Indraindray foana ny kapoakako. Rehefa tsy mahatsiaro tena ho tsy misy na inona na inona, ara-batana sy ara-pihetseham-po aho, dia sarotra ho ahy ny mandoa. Tsy irery aho amin'izany. Azoko antoka fa azonao atao ny manamarina fa ny mpiasa manontolo andro sy ny mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny vondron'olona, ​​indrindra aorian'ny fampakaram-bady dia mila maka fotoana ampy hanamafisana. Taorian'ny fihaonambe sy hetsika lehibe hafa dia mila fitsaharana kely foana aho.
Ka amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika mandanjalanja? Ho fanampin'ny fialan-tsasatra amin'ny fandriana, ny fomba tsara indrindra hitaterana ny bateriaanao dia ny fandanianao fotoana miaraka amin'Andriamanitra: famakiana ny Baiboly, fisaintsainana, fanirery, fandehanana ary indrindra ny vavaka. Tena mora ho an'ny tsy fahita amin'ny fiainana ny fanoloana ireo singa manan-danja ireo, kanefa fantatsika rehetra fa zava-dehibe ny mamboly sy mankafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fikarakarana sy ny fifaliana no famariparako ny hoe "akaikin'Andriamanitra". Matetika aho no napetraky ny tenako tamin'ity halatra ity. Tsy haiko ny manana fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fomba tokony hisehoany tsara. Nanahy aho ny hanana fifandraisana amina olona tsy hitanao - tsy mbola nahita an'izay aho taloha. Nandritra ny fotoam-pahanginana mangina, dia nahita fahamarinana tsy maharitra aho izay efa nampiharina hatry ny fiandohan'ny Fiangonana voalohany ary tsy fantatro tsara ny dikany hatramin'izay. Ny marina dia ny vavaka dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ho antsika hahita, hamantarana, hamelomana indray ary hizara ny fifandraisana izay nananan'i Jesoa hatrany amin'ny Ray. Tampoka teo dia nahita jiro aho. Izaho dia nitady zavatra manaitra sy milay ary tia mampientanentana kokoa noho ny vavaka hitana ny fifandraisako amin'Andriamanitra.
Mazava ho azy fa efa fantatro ny maha-zava-dehibe ny vavaka - ary azoko antoka fa nanao izany koa. Saingy tsy tokony hangataka fankasitrahana ve isika indraindray? Mora tokoa ny mahita ny vavaka ho fotoana itaterantsika ny lisitry ny faniriantsika amin'Andriamanitra, fa tsy ny fotoana hikolokoloantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy hankafizantsika ny fanatrehany. Tsy ekenay ny miomana ho amin'ny fanompoana eo amin'ny fiaraha-monina, fa Andriamanitra sy ny Fanahy Masina maka toerana ho antsika.